Ukufumana iMbono ephambili yeSahluko sePhepha 2
Ukufumanisa Iinjongo eziphambili zeMigatya
Ukufumana ingcamango ephambili yomhlathi okanye isicatshulwa akulula nje njengoko kubonakala, ingakumbi ukuba awuphelelanga. Ngoko, nantsi ingcamango ebalulekileyo yamaphepha efanelekileyo afanelekileyo esikolweni esiphakamileyo okanye ngaphezulu. Jonga ngezantsi malunga neengcamango ezinkulu zokufunda kunye nokufunda imibuzo yokuqonda kunye neepdfs eziprintiweyo kubafundisi abaxakekileyo okanye abantu bafuna ukuphucula izakhono zabo zokufunda .
Iingcamango ezingakumbi zoMsebenzi
Ukuqonda Ukufunda Iifayile
Izikhokelo: Funda iziqendu ezilandelayo uze ubhale ingcamango esisisigxina esisigxina ngasinye kwisahluko sephepha elibi. Cofa kwiikhonkco ezingezantsi kwemihlathi yezimpendulo. Ingcamango ebalulekileyo iya kuthethwa okanye ichazwe .
Iimpapasho zePhasiwedi: Ukufumana iMbono ephambili 2 Iphepha lokusebenzela | Ukufumana iMbono Eyona-2 Iimpendulo
Ukufumana iMbono Eyona Mhlathi 1: Amaklasi
Ummandla wendawo yokufundela ubaluleke kakhulu kuba unokuchaphazela indlela ootitshala nabafundi abavakalelwa ngayo, becinga, kwaye baziphathe. Ukuba umfundi uziva ecinezelekile, phantsi kwengcinezelo, engonwabi, okanye engaphephile, akunakwenzeka ukuba yena okanye afunde izifundo ezicwangciswe ngu titshala. Ngokufanayo, ukuba utitshala uyaziva engonwabile okanye engahlanjululwa ngenxa yokungabi nalutho kwinqanaba leklasi okanye iinkcukacha, amandla akhe okufundisa ayancipha kakhulu. Imeko yendawo yokufundela isebenza imisebenzi emine eyisiseko: ukhuseleko, ukunxibelelana koluntu, ukuzonwabisa kunye nokukhula. Ukufunda kwangempela nokufundisa ukuba kwenzeke, zonke ezine zazo zidingo kufuneka zidibene neklasi yeklasi.
Yintoni eyona nto ingundoqo?
Ukufumana iMbono Eyona Mhlathi 2: Amandla aseChina
Ngenxa yokuba amava aseYurophu namava kunye nomlinganiselo wokulinganisela amandla, abaninzi bakholelwa ukuba iChina ayikwazi ukunyuka ngokuthula ngamandla, kodwa kukho abantu abambalwa abanikeza imibono ehlaziyayo, ekholisayo neyichukumisayo echaza ngenye indlela. Aba bayi-ntanethi bagxininisa ukuba kwindlela ebonakalayo, ukunyuka kweTshayina makube sele kushukumisa ukuziphatha ngokulinganayo ngabamelwane babo; Nangona kunjalo, ukunyuka kwawo kuye kwavelisa encinane loo mpendulo. Amazwe aseMpuma yeAsia ayilingani iChina; bahlala kuyo, kuba iChina ayizange ifune ukuguqulela isikhundla sayo esiphezulu ekunqobeni abamelwane bayo. Ukuthi ukuvela kweChina njengamandla ehlabathi kunokufumana indawo eMpuma ye-Asia ngokuthula kwaye ihlabathi liyimbambano enkulu kummandla wezopolitiko lwamazwe ngamazwe, obangela ukuba kujongene noxanduva.
Ukufumana iMbono ephambili Isigaba 3: Imvula
Ngokuvakalayo xa imvula, ukudibana okuthile kuhla emhlabeni. Uninzi lwabantu lufihla ezindlini zabo ukuthumela iindwangu ezifakwe kwiwindow. Izilwanyana ziyaxhamla kwiindawo ezihamba phambili kunye neencrannies, zikhankanya iintloko zazo ukuze zenzeke ngokukrakra umoya ngeempawu zesimo sezulu esomileyo. Nangona i-pellets yamanzi isuka esibhakabhakeni, umphefumlo onobuqhophozi oza kuthiwa uya kuphuma kwindawo yokuqhuma okanye intaka iya kukhwaza ngokunyanisekileyo kwidaka lokudaka, ukugxotha imvula. Abanye abantu babiza aba bahamba ngeentlanzi, kodwa abanye babhiyozela ukuzimisela kwabo bantu ukuba bavume ukungabi nantoni kwaye bayiphendule into into efanelekileyo.
Ukufumana iMbono ephambili Isigaba 4: iMathematika
Ukususela ebusheni, idatha ibonisa ukuba amadoda angaphaya kwamabhinqa kwiimvavanyo zeematriki kunye neemvavanyo zokuqiqa izibalo, nangona kukho ukungafani kwi-IQ. Idatha yangoku kunye nabafundi beekholeji kunye novavanyo olulula lwezibalo ze-arithmetic lubonisa ukuba abesilisa banamanqaku aphakamileyo kunabesifazane nangona ukusebenza kulinganiswa kusetyenziswa uvavanyo lwesigane se-arithmetic. Isizathu sokungafani kwamanani asibuzwayo ngenxa yokuba i-quotient yeengqondo ezifundiswayo zabafundi zivela ukusuka ngaphantsi ukuya kumyinge ophezulu kumabini omabini. Ukufumana ukuhlukana kobulili kwimisebenzi yamatriki ukususela ebuntwaneni kukufumanisa oko kuphakamisa intsingiselo malunga nesizathu sohlukwano - luhlobo okanye ukukhutshwa okubandakanyekayo okanye ukudibanisa kokubili?
Ukufumana iMbono ephambili Isiqendu 5: Iifilimu
Ukuya kumabhayisikobho kuye kwaba ngumsebenzi weveki apho abantu abaninzi bakhokhela imali eninzi yokwenza. Iifilimu zithengisa le mihla, kodwa isiqhelo asikwazi ukudweba izihlwele. Kwaye nangona ezinye iifilimu zinemifanekiso ebalulekileyo, ukubonakaliswa kunye neenkcukacha zobugcisa, ezinye ziyingozi nje ngeendlela zonke. Sekunye kanye ngexesha elithile, ifilimu iya kubonakala kwisikrini esikhulu esiza kuzifumana kwindawo efanelekileyo kwimbali njengefilimu emangalisayo, echaphazela ubomi babantu. Kwaye, ngokwenene, akukhona ukuba bonke abantu bafuna ngokwenene njengoko behamba beza kuboniswa, ngeveki emva kweveki? Ingcaciso emfutshane ebomini apho abantu bevakalisa oko i-moviegoer ivakalelwa ngayo? Kufuneka ukuba, ngaphandle koko abantu babeza kulukhusela iimpahla zabo baze bahlale ekhaya.
Ukufumana iMbono Eyona Mhlathi 6: iTroopathon
Njengoko iimpi zalwa ngendlela yazo entlango ngexesha lemfazwe e-Iraq, ingxelo evela kumajelo aqhelekileyo yayifana ngokufana neyokulwa nemfazwe esele. Umkhosi wemikhosi wawuqhutyelwa ngokunyanisekileyo ngxelo yeendaba ezithi imikhosi yaseMerika yababulali kwaye imfazwe yenkxalabo yayilahlekile. Ukukhathazeka ngamanga kunye nokunyaniseka okuqhutywe yiendaba, uMelanie Morgan wanquma ukulwa. Ngoko uMorgan wajoyina iinxaxheba zezopolitiko uSol Russo kunye noHoward Kaloogian ukudala intlangano engenzi-nzuzo eyenza i-Troopathon, i-web-telethon fundraiser ye-web year ephakamisa imali yokuthumela iiphakheji zokunyamekela kwimikhosi e-Iraq, e-Afghanistan naseGuantanamo Bay. Ekubeni iTroopathon yokuqala yabanjwa iminyaka emithathu edlulileyo, umbutho uphakamise ngaphezu kwezigidi ezigidi zamadola.
Ukufumana iMbono Eyona Mhlathi 7: Ubudlelwane
Ngexesha elinye okanye kwelinye, abantu abaninzi abadala baye bahlala besondelene. Umfana uhamba waya kwintombazana ebharini, ufumana inamba yakhe, kunye nokuqala kobudlelwane. Umfana kunye nentombazana badibana kwiFiksiki yeklasi, badibana njengabalingane bokufunda, kwaye ezinye iimbali. Iingqungquthela eziphakamileyo zezikolo eziphakamileyo zezikolo zivuselela ilangabi elidala kwi-Facebook emva kweminyaka emibini. Ezi ntlobo zokuhlangana ezilula zingakhokelela ekubudlelaneni, kwaye nangona loo ntlanganiso yokuqala ilula, ulwalamano olupheleleyo alukho. Umsebenzi omningi usenza ulwalamano oluqinileyo, kwaye xa lo msebenzi uphelile, ulwalamano alukwazi ukuhlala.
Ukufumana iMbono Eyona Mhlathi 8: I-Technology Technology
Kancinci, kwimihla embalwa edluleyo, iteknoloji, kuzo zonke iifom zayo ezahlukeneyo, iye yaqhubela kumaziko emfundo e-United States kwaye ngoku ikhona. Iikhomputha zikhoyo kwiikholeji ezininzi; Abafundi bebakala lesibini basebenzisa iikhamera zedijithali kwiiprojekthi zesayensi; ootitshala basebenzise iikhamera zedokethi kwizifundo; kunye nabafundi bobudala uphando kwi-intanethi nge-smartphones, i-smartpads kunye ne-laptops. Nangona abavakalisi bebuyile kunye nabachasi bekhwaza, iteknoloji yenze indlela yokuya eziklasini zaseMelika kunye nolwazi lwezicelo zalo lube yimfuneko ebalulekileyo kwimfundo yanamhlanje. Abanye abantu, nangona kunjalo, abawamukeli lo mqathango ngenhliziyo yonke. Abachasene nefuthe elikhulu lobuchwephesha kwiinkqubo zesikolo bathi iingxelo zeteknoloji ziye zabonakaliswa ukuba zinezizathu ezifanelekileyo zokwamkela kunye nokungaphumeleli kwayo. Nangona iinjongo zabo ezilungileyo, abahlalutyi bokuhlanganiswa kwethekhnoloji baphosakele, kwaye malunga neminyaka engamashumi amabini emva kwamaxesha.
Ukufumana Iinjongo eziphambili Isigaba 9: Ukusetyenziswa okulungileyo
Icandelo lokurekhoda liye lide kakhulu kumlo walo wokulwa kunye nabafaki befayile kwiiNkqubo zoLawulo lwe-copyright (i-CMS), ezisetyenziselwa ukunyanzelisa i-Information Management Management (i-CMI), inokubangela ukuba abasebenzisi "basebenzise ngokufanelekileyo" ulwazi lwedijithali. Ngokomgaqo we-US, Isihloko 17, isahluko 1, icandelo 107, ukukopishwa kolwazi olumalungelo olunyanisekileyo kuvunyelwe "ngeenjongo ezifana nokugxekwa, ukuvakalisa izimvo, ukubika kweendaba, ukufundisa (kuquka iikopi ezininzi zokusetyenziswa kwamagumbi okufundela), u-scholarship, okanye uphando".
Zininzi iinkqubo ezicetywayo zokulawulwa kwe-copyright, ezifana nokudala i-hardware kunye nezixhobo "zokuphikisana nokuphikisana" ezifakwe apha, zingabangela ukuba kusebenziswe ngokulinganayo ukusetyenziswa kwesigwebo kumthetho we-copyright ngokukhusela abaqeqeshi ngokusemthethweni ukukhusela ekusebenziseni izinto ezifanelekileyo. Inokuthintela ukukopishwa kwezinto ezingabhalwanga ngumsebenzisi ngumsebenzisi osemgangathweni. Ukuba umntu unqwenela ukwenza ikopi yeCD engekho i-copyright, ukwenzela ukuba abe nekopi ekhaya kwaye enye emotweni, inkqubo yokulawula i-copyright iya kumthintela kulo msebenzi ofanelekileyo.
Ukufumana Iinjongo eziphambili IsiGaba se-10: I-Mares
Uphononongo olutshanje lulandele iinqwelo zamahashe eziqhumayo kwii-Kaimanawa ezintabeni zaseNew Zealand ngaphaya kweeminyaka emithathu, zinezinto ezifunyanisayo ezithintekayo ngokumalunga nokulingana kwamazinga oluntu. U-Elissa Z. Cameron, ngoku eYunivesithi yasePitoli eMzantsi Afrika, kunye nabalingane ababini baqhelanisa amanqaku angamaqela ngamashumi amahlanu anesithandathu ama-mares, ngokusekelwe kwimilinganiselo efana nexesha leyilwanyana ngalinye elichithwe kufuphi namanye amaqabane kunye nenani lokuzilungisa loluntu . Iqela lifumene ukuba amanqaku ahambelaniswe kakuhle kunye nezinga lokunyusa: ii-mares ngaphezulu zentlalontle zazinamafu. Baye baxhatshazwa kakubi kangako ngamabutho ambalwa abantu.
Fumana iNgcamango ephezulu yokuSebenza kunye nokuSebenza
Izinto Ezozenzayo Ukudibanisa Umfundi WaseKholeji
IiNdawo kunye nePerimeters yePolgoni
Iingcebiso zokuthenga i-Ballet Slippers
UZakeyu - Umqokeleli weRhafu oguqukayo
Inkolelo ye-Er evela kwiRiphabhlikhi yasePlato
IQiniso, nguFrancis Bacon
Uluhlu olukhulu kunazo zonke lwabalandeli beCattoon beBartoon